हेलिकप्टर सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा उडाएर ज्यान बचाउने नेपालकी एक मात्र महिला उद्धार पाइलट ! – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०६, २०७७ समय: १:०१:०६
हाम्रो देश नेपालमा महिलाहरुले घरको मात्र काम गर्नु पर्दछ बाहिरको काम त केबल पुरुषको लागि मात्र हो भनेर केही कतै सोच्ने गरिन्छ । तर महिलाहरुले पनि मौका पाए भने पुरुषहरुले जस्ते साहासिक काम गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण कतिपय महिलाहरु बनिसकेका छन ।
राम्रो नाम काम दाम पनि कमाईरहेका छन । मात्र उनीहरुलाई परिवार सबैले साथ अनि माया दिनु पर्दछ । आज हामी त्यस्तै एक जना साहासिक महिलाको बारेमा चर्चा गर्ने गईरहेका छौं ।३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् ।
प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग पनि गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले अहिले त्यही करिअर रोजेकी छिन् !
प्रिया अधिकारी हाइस्कुलको पढाइपछि मेडिकल कक्षामा भर्ना हुनको लागि भारत पुगेकी थिईन । त्यतिबेला भर्नाको प्रक्रिया चलिरहको थियो तर घरबाट फोन आयो । भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको थियो तर घरबाट फोन आयो कि आमाको स्वास्थ्य खराब रहेको छ ।
त्यपछि उनी फर्कनु पर्यो । आमालाई सन्चो भएपछि मैले काठमाडौंमै बुद्ध एयरलाइन्समा क्याबिन क्रुको जागिर गर्न थालें । यो मेरो पहिलो हेलिकप्टर उडान थियो । घर आएर मैले आमासँग भनें बरु म ऋण लिन्छु तर पाइलट नै बन्छु । पहिलो उडानको ४ महिनापछि नै मैले हेलिकप्टर उडाउँदैछु ।